चर्चित ९ नारी » Enavanari
चर्चित ९ नारी
कानूनको नजरमा महिला र पुरुष समान छन् तर समाजले अहिले सम्म पनि महिला र पुरुषलाई समान मान्न सकेको छैन । महिला भन्ने वित्तिकै हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण फरक रहदै आयो । महिला र पुरुष बीचको बिशाल खाडल कानूनले पनि पुर्न सकेको छैन । पुरुष प्रधान समाजले महिलालाई अगाडि बढ्नको लागि सधै रोक्ने प्रयास गरि नै रह्यो । तर यो प्रयासलाई चिर्दै, पुरुषहरुलाई चुनौती दिदै महिलाहरु विभिन्न क्षेत्रमा अगाडी बढिरहेका छन्, समय अनुकुल र परिस्थितिअनुसार महिलाले आफुलाई काली, शक्ति स्वरुपा तथा अन्य देवीको रुप धारण गरेका हुन्छन् । नारीका यहि बिभिन्न रुपका कारण समाज व्यवस्थित र अनुशासित हुन सकेको छ । दशैं विशेष यस अंकमा केहि सफल नारीशक्ति हरुलाई हामीले यहाहरु माझ प्रस्तुत गरेका छौं ।
राजनीतिमा सफल र अब्बल महिला
भोजपुरबाट विद्यार्थी राजनीतिमा उदाएकी विद्या देवी भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन् । उनी दुई पटक सम्म राष्ट्रपति बन्न सफल महिला हुन् । जननेता मदन भण्डारीकी श्रीमती समेत रहेकी उनी २०५० सालको चुनावमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर संसदीय राजनीतिमा होमिएकी थिईन् । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल उनी एक उदारणीय व्यक्तित्व हुन् ।
वातावरण मन्त्री, रक्षा मन्त्री हुदै“ नेपालकै अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने पद राष्ट्रपति बन्न सफल भएकी उनी राजनीतिमा मात्र नभएर पारिवारिक जीवनमा समेत सफल रहिन् । यसो त पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल उनले आफ्नो कार्यकाल सफलता पूर्वक पूरा गरिन् । हाल दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेकी छन् । माने भन्ज्याङ् भोजपुरमा जन्मिएकी भण्डारी एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियुबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिईन् । बोहरेश्वर प्राथमिक विद्यालय भोजपुरबाट प्राथमिक शिक्षाको शुरुवात गरेकी उनले भोजपुर बाटै एस.एल.सी उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । भोजपुर क्याम्पसमा आइ.ए.अध्ययनको थालनी सगै वि.सं.२०३५ देखि नेकपा मालेका युवा लिगमा संगठित हुदै विद्याले राजनीतिक जीवनको थालनी गरेकी थिइन् । भूमिगत अवस्थामा विवाह बन्धनमा बा“धिएकी उनी आफ्ना श्रीमान्को जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि राजनीतिमा पुनः सक्रिय भएकी हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट संसद सम्म पुग्न सफल भण्डारी नेपालमा गणतन्त्र आए पछिको दोश्रो अनि तेश्रो राष्ट्रपति हुन् । स्थानीय चुनाव, प्रतिनिधि तथा प्रदेश निर्वाचन पछि तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलामा चौतर्फी विरोध नभएको भने होइन तर समय, योग्यता र कार्यक्षमताले गर्दा दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने अवसर उनैको पोल्टोमा आयो । उग्र रुपमा राजनीतिक जीवनको चर्चा भएता पनि भण्डारी सफल, अब्बल महिला तथा राजनीतिज्ञको रुपमा समाज र राष्ट्रमा परिचित छिन् ।
महिला हिंसा विरुद्ध कि सारथी
अनुराधा कोइराला, प्रमुख, प्रदेश नं. ३
अनुराधा कोइरालाको जन्म ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जाटारमा गुरुङ परिवारमा भएको हो । उनका बाबु कर्णेल प्रताप सिंह गुरुङ र आमा लक्ष्मी गुरुङ हुन् । उनी सानै देखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न रुचि राख्थिन् । विशेषगरी विभिन्न देशमा विभिन्न माध्यमबाट नेपाली चेलीबेटी बेचिदै आएको र सकेसम्म बेच्न नदिने र बेचिएका चेलीलाई उद्धार गर्ने कार्य गर्दै आएको संस्था माइती नेपालको संस्थापक हुन् उनी । सिएनएन हिरो अवार्ड पाउन सफल उनी हाल प्रदेश तीनको प्रमुखको भूमिकामा रहेकी छिन् ।
माइती नेपालमा प्रवेश गर्नु पूर्व गौशला बसाई भएकी अनुराधा पशुपतिको नियमित दर्शन गर्ने गर्थिन् । सोही क्रममा पशुपति परिसर बाहिर बाटोमा बच्चा अगाडि राखेर भिक्षा माग्नेहरू प्रशस्त देखा पर्थे, उनलाई त्यो दृष्य देख्दा मनमा प्रश्न उब्जन्थ्यो । यसरी दिनभरी सडकमा मागेर राति आकाशको ओत लाग्नेहरू यौनजन्य हिंसाबाट टाढा रहन सक्लान त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा एक मगन्ते महिलास“गको वार्तालापबाट थाहा भयो उनको शंका ठीक रहेछ । यौनजन्य हिंसाबाट मुक्त गर्न उनले भेटिएकामध्ये नौ जनालाई सहयोगस्वरूप कोठा लिन तथा नाङ्लो पसल थाप्न प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैंया“का दरले उपलब्ध गराएर उनले समाजसेवाको बाटो प्रारम्भ गरेकी थिईन् ।
महिलाको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर त्यसपछि उनले आफ्नो बचत रकमको केही हिस्सा जोगाउन थालिन् र आ“फूले लगानी गरेर पसल सुरु गरेका महिलाहरुबाट पनि प्रतिदिन २ रुपैया उठाउन थालिन् । उक्त रकमबाट १० जना बालबालिकालाई सहयोग गर्न थालिन् । तलबले तिनलाई ख्वाउन पुग्ला भन्ने आशा राखेकी अनुराधामा ऋण थपि“दै गएको थियो । यसै बीचमा उनलाई क्षयरोगले समात्यो तर पनि उपचारपछि मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा फैलिएको चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध चेतना फैलाउने उद्देश्य छाडिनन् । पद्मकन्याका विद्यार्थी र प्रहरीलाई साथमा लिई बेचबिखनको मुख्य स्थान भनेर चिनिएका स्थानहरुमा घुम्न थालिन् । यसरी उनी सन् १९९३ मा स्थापना भएको माइती नेपालको संस्थापकको रुपमा काम गर्न थालिन् ।
सन् २०१० मा चेलीबेटीको उद्दार गरेवापत सिएनएन हिरोबाट सम्मानित कोइराला सन् २०१७ मा भारतको सबैभन्दा ठूलो पदक पद्मश्री पदक पाउने पहिलो विदेशी नागरिक बनेकी थिइन् ।
१० कक्षासम्म भारतको कालिम्पोङमा अध्ययन गरेकी उनले भारतकै कोलकाताबाट बि.ए. पास गरेकी हुन् । चार जना दाजुभाइ र दुई दिदी बहिनीमध्येकी उनी का“इली हुन् । १९ वर्षे किशोर उमेरमा काठमाडौंका दिनेशप्रसाद कोइरालास“ग वैवाहिक बन्धनमा बा“धिएकी उनको दाम्पत्य जीवन भने सफल रहेन । तर सधंै न्यायको लडाईमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न उनी सफल रहिन् । महिला हिंसा बिरुद्ध उनका पाइलाहरु अगाडि बढि रहे फलस्वरुप उनी नेपालमा मात्र होइन बिश्वमा नै परिचित बन्न पुगिन् । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता हा“सिल गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाउन सफल उनी प्रदेश नं. ३ को प्रमुखको भूमिकामा अ“ाफूलाई सफल बनाएकी छिन् ।
उपत्यकावासीलाई समयमै मेलाम्चीको पानी खुवाउनेछु
बिना मगर, मन्त्री, खानेपानी मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री बिना मगरको जन्म वि.स.२०४० साल मंसिर २२ गते कञ्चनपुरको पुर्नवासमा भएको हो । बुबा चन्द्रबहादुर मगर र आमा सावित्रीमाया मगरकी उनी जेठी छोरी हुन् । उनले पुर्नवासको अरनिको वस्तीस्थित अरनिको प्रा.विबाट शिक्षा आरम्भ गरिन् । पुनर्वासकै गौरीशंकर निम्न मा.वि हुँदै जनता मा.वि पुनर्वासबाट उनले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरिन् । वाल्यकालदेखि नै समाजमा विद्यमान गरीबी, असमानता र विभेदले उनमा विद्रोही स्वभाव विकास भयो ।
२०५१ सालमा ११ वर्षको उमेरमै उनी जन बालकलाकारको भूमिकामा राजनीतिमा प्रवेश गरिन् । गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम सुविधा समेत नपाएका कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका वस्तीहरूमा जनताका आवाज उठाउँदै हुर्किएकी उनी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छँदा माओवादी आन्दोलनमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भइसकेकी थिइन् ।
राजधानी काठमाडौंमा माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय रहेकै बेला २०६० सालमा उनलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गर्यो । वेपत्ता अवस्थामा नै भैरवनाथ गणमा सत्ताइस महिनासम्म उनले चरम यातना भोग्नुपर्यो । धेरै सहयोद्धासँगै बेपत्ता पार्न लैजाने क्रममा ट्रकमा अट्ने ठाउँ नभएपछि उनी संयोगवश ब्यारेकमै छुटेर बाँच्न सफल भएकी थिइन । काठमाडौंको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको स्ववियू सदस्य पदमा जितेकी बिना मगर अखिल (क्रान्तिकारी) काठमाडौंको जिल्ला अध्यक्ष भइन् ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुरको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट झिनो मतान्तरले पराजित भएकी उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भइन् ।
उनी चौतिस वर्षको उमेरमा मन्त्री बन्न सफल महिला हुन् । २०६४ सालको स्ववियू निर्वाचनमा उनी सरस्वती क्याम्पस लैनचौरको स्ववियू सभापतिमा विजयी भइन् । यससँगै उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनिन् । प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालसँग दोश्रो पत्नीको रुपमा उनको विवाह भएको थियो । प्रकाश संगको विवाहले उनको संघर्षशील राजनीतिलाई छायाँमा पारिदियो ।
बिना युवापुस्ताकी संघर्षशील नारी हुन्, उनले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेदेखि धेरै काममा सफलता प्राप्त गरेकी छिन्, पुरा हुन नसकेका देशभरका धेरै आयोजनाहरु पुरा भएका छन्, केहि नयाँ योजना थपिएका छन् भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशभरका विभिन्न २० वटा सहरहरुमा आयोजना निर्माण तथा सरसफाईको दिगो व्यवस्थापनको लागि १७८ दशमलब ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले उनलाई मेलाम्ची परियोजना समयमा नै सकाउनु पर्ने अप्ठ्यारो जिम्मेवारी पनि छ । विचमै काम छाडेर ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागे पछि काकाकुल बनेका उपत्यकाबासीले उनीबाट ठुलो आश गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनी भागे पनि बाँकी काम सरकार आफैंले गर्न सक्ने दावीका साथ उनी अहिले मेलाम्चीको काममा सक्रियताका साथ लागिपरेकी छिन् । मेलाम्चीको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ, अव मेलाम्ची आयोजना पुरा गरेर काकाकुल उपत्यकावासीलाई उनले पानी खुवाउने छिन् ।
महिलामैत्री नीतिनियमका लागि प्राथमिकताका साथ पहल गर्नेछु
भवानी राणा, अध्यक्ष , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासमा महासंघको ५१औं वार्षिक साधारणसभाबाट पहिलो पटक भवानी राणा महिला अध्यक्ष पदमा चुनिएकी व्यक्तित्व हुन् । महासंघमा वि.सं. २०६२ सालमा प्रवेश गरेकी भवानी २०६४ देखि २०६७ मा पहिलोपटक महिला कार्यकारिणी समिति सदस्यमा निर्वाचित भएर महासंघमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले महिला उद्यमी विकास समितिका सभापतिको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेकी छिन् ।
मनमोहन मिश्र तथा शोभा मिश्रकी कान्छी छोरीको रुपमा २०२६ सालमा भवानीको जन्म भएको हो । राजनीतिक पृष्ठभुमिमा हुर्किएपनि भावनी राणालाई सफल व्यवसायी बन्ने इच्छा थियो । सेन्ट मेरिज स्कुल काठमाडौंबाट विद्यालय शिक्षा पार गरेकी भवानीले भारतको लखनउबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नात्तोकोत्तर गरेकी छिन् । साथै एक वर्षको फेसन डिजाइनिङ कोर्ष पनि उनले पुरा गरेकी छिन् ।उनले सन् १९८५ तिर आफ्नो दिदीस“ग मिलेर काठमाडौंमा गार्मेन्ट उद्योगमा समेत लगानी गरेकी थिइन् । तर निरन्तरको बन्द हडताल तथा राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि उनको उद्योग बन्द हुन पुगेको थियो ।
अमित शमशेर जवरासंग उनको २०५१ सालमा २३ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह भएको हो । उनले २०४६ सालबाट अमेरिकन दुतावासमा ५ वर्ष काम गरिन् । उनी दुई छोराहरुकी आमा हुन् । भवानी राणाको नेपालगन्ज स्थित होटल स्नेहामा लगानी छ । त्यस्तै पर्यटन, कार्गो क्राफ्ट भिलेज तथा कृषि क्षेत्रमा उनको लगानी रहेको छ । अहिले कृषि व्यवसायमा लगानी गरेकी राणा पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने सोच रहेको बताउ“छिन् । अध्यक्ष भइसकेपछि महिलाका लागि मात्रै नसोचेर समग्र निजी क्षेत्रका लागि काम गर्ने उनले बताएकी छिन् तर, महिला भएको नाताले महिलामैत्री नीतिनियमका लागि पनि प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरेकी छिन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै ट्रेड युनियनस“ग सहकार्य गरेर सरकारको पनि सहयोग लिएर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउ“दै उनी भन्छिन् ‘यसका लागि सबैबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाहको खा“चो छ । हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा सबै रोजगारदातालाई मजदुरमैत्री बन्न आग्रह गर्छौ भने श्रमिक साथीहरूले पनि रोजगरादातास“गै मिलेर समृद्धिको पक्षमा योगदान पु‍र्याउन आग्रह गर्छौ । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहकार्यबाटै समृद्धि सम्भव छ र यो सहकार्य मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पनि कोसेढुंगा हुनेछ ।’
महिला अधिकार मेरो प्राथमिकताको क्षेत्र हो
महिला अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मी वन्दना राणा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिड) को उपाध्यक्षमा दुई वर्षको कार्यकालको लागि निर्वाचित भएकी छिन् । संयुक्त राष्ट्र संघ मुुख्यालय न्युयोर्कमा सम्पन्न चुनावबाट राणा दुई वर्षे कार्यकालका लागि भारी मतले निर्वाचित भएकी हुन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उनी डिसेम्बर २०२० सम्मका लागि निर्वाचित भएकी हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको यो समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो नेपाली बन्न राणा सफल भएकी छिन् । सन् २०१६ मा उनी उक्त समितिको विशेषज्ञ सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन् । यस समितिमा विश्वभरबाट महिलाका मुद्दामा विज्ञ रहेका २३ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । गत मार्चमा नेपाल सरकारले वन्दनालाई यस पदको लागि सक्षम र दक्ष ठानेर नेपालको तर्फवाट सीडका लागि उम्मेदार घोषणा गरि कुटनीतिक तरिकाले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूलाई उनलाई मत दिन आह्वान पनि गरेको थियो ।
सञ्चार क्षेत्रमा आवद्ध उनी सामाजिक मुद्दा र महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी छिन् । उनी महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावविरुद्ध काम गर्ने सामाजिक संस्था ‘साथी’ की संस्थापक हुन् ।संचारिका समूहको प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बन्दना राणाकै अग्रसरतामा ‘आईवार्ट नेपाल च्याप्टर’को सुरुवात भएको हो । आईवार्ट रेडियो र टेलिभिजनमा काम गर्ने महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । उनले यु.एन.ओमन ग्लोवल सिभिल सोसाइटीको सल्लाहकार समुहमा काम गरिसकेकी छिन् भने ग्लोवल नेटवर्क अफ ओमन सेल्टरको अध्यक्षको साथसाथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा पनि सक्रिय रुपमा आवद्ध रहेकी छिन् । उनले समानता र मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदान गर्ने ‘वोमन अफ डिस्टि·सन अवार्ड’बाट समेत सम्मानित भएकी थिइन् । विकाशोन्मुख राष्ट्रमा महिला अधिकार र सशक्तिकरणका लागि उल्लेखनीय भूमिका निभाउने महिलाहरु मध्येवाट चुनिने यो सम्मान वन्दना राणा र अफ्रिकी अधिकारकर्मी अमिना महमदले पाएका थिए । वन्दनालाई पुरुस्कृत गरिनुको कारणसहित जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘स्थानीय समुदायस्तरदेखि क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म महिला तथा मानव अधिकारको लागि उल्लेखनीय पैरवी गरेको’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचित भएर आएपछि उनले भनेकी छिन् ‘यो समितिले सीड महासन्धि अनुमोदन गरेका राष्ट्रहरूमा महिलाहरुमाथिको विभेदको अवस्थाको अध्ययन गरी ती राष्ट्रलाई यसको सुधारको लागि सुझाव दिने हुनाले मेरो सहभागिताले महिला अधिकार प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी रुपमा भइरहेका कामलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न पनि मद्दत पुग्नुका साथै महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालमा भएका सकारात्मक उपलव्धि र स्थानीय तहका घटनालाई विश्वव्यापी वनाउन समितिमा आफ्नो उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने छ, यो जीत मेरो मात्र नभई नेपालको र नेपालीको जीत हो, महिला अधिकारको लागि म डटेर काम गर्नेछु ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिमा महिला अधिकार,महिला सशक्तिकरण र मानव अधिकारको लागि काम गर्ने विश्वभरवाट चुनिने २३ जना विज्ञ महिलामा नेपालको तर्फवाट वन्दना राणा निर्वाचित हुनु नेपालको लागि र दक्षिण एसियाकै लागि गौरवको कुरा हो, उनको यो सफलताले नेपालको शीर विश्व जगतमा उँचो भएको छ । आज हामी वन्दना प्रति गौरवान्चित भएका छौं, उनलाई मुरीमुरी बधाईको साथै कार्यकालको सफलताको शुभकामना ।
मिस वल्र्ड २०१९ जित्ने लक्ष लिएकी छु
अनुष्का श्रेष्ठ, मिस नेपाल २०१९
मिस नेपाल २०१९ को टाइटल हात पार्न सफल भएकी व्यक्ति हुन् अनुष्का श्रेष्ठ । मिस नेपाल अनुष्का फेसन डिजाइनर मुक्ता श्रेष्ठकी छोरी हुन् । अष्ट्रलियामा बस्ने अनुष्काले मिस नेपालमा भाग लिनको लागि नै कमनवेल्थ बैंकको जागिर छोडेर नेपाल आएकी हुन् । उनी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि बंैकमा अडिट एडमिनिस्टेटर थिइन् । उनी यसअघि सिडनीमा भएको मिस नेपाल ओसियाना २०१८ प्रतियोगितामा समेत विजेता बनेकी थिइन् ।
पाँच फिट चार इन्च अग्ली अनुष्काले अष्ट्र«ेलियाको युनिभर्सिटीबाट बिबिए गरेकी हुन् । काठमाण्डौंमा जन्मेकी अनुष्कालाई मिस नेपालको क्राउन २०१८ की मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले लगाइदिएकी थिइन् ।
ट्राभल गर्न रुचाउने उनी ६८औ मिस वल्र्डमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छिन् । जुन प्रतियोगीता आउँदो डिसेम्बरमा बैंकक थाइल्याण्डमा हुनेछ । मिस नेपाल २०१९ मा अश्मि श्रेष्ठ, सन्नी रौनियार प्रधान, बिदुषी राणा, सुनिता लिम्बु, पवन बहादुर पाण्डे, तुविजा अग्रवाल, राजिव शाह आदि निर्णायकको भूमिकामा थिए भने मुख्य निर्णयक इला शर्माले सोधेको हामीले अधिकारलाई भन्दा कर्तव्यलाई ध्यान दियौ भने यो संसार राम्रो बन्न सक्छ होला, तपाई यसमा के भन्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिदै उनी विजेता बनेकी हुन् । उनले आफुसँगै आएका पच्चिस जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मिस नेपाल २०१९ बन्न सफल भएकी हुन् ।
अष्ट्रेलियाको जागिर छोडेर अनुष्का नेपालमा नै केहि गर्छु भन्ने सोचका साथ नेपाल छिरेकी थिइन् । मिस नेपालको ताज सँगै अब उनलाई आफ्नो देशको लागि केहि गरेर देखाउने बाटो समेत खुल्ला भएको छ । पाँच बर्ष अगाडि पढाइकोलागि अष्ट्रेलिया पुगेकी उनले आफ्नो प्रतिभालाई त्यहाँ पनि प्रस्फुटन गराइन् ।
२३ बर्षकी अनुष्कालाई जागिर भन्दा मिस नेपाल बन्ने हुटहुटी मनमा थियो । उनलाई धेरैले यति राम्रो जागिर छोडेर मिस नेपालमा भाग नलिन आग्रह गरेका थिए तर उनले केवल आफुलाई सुनिन् र आफ्नो निर्णयमा अडिग बनिन् । अब उनीसँग अर्को चुनौती थपिएको छ मिस वल्र्डमा आफुलाई अब्बल साबित गर्ने । हरेक बर्ष मिस नेपाल वल्र्ड प्रति नेपालीहरुले ठूलो आशा गरेका हुन्छन् । यसपटक पनि मिस नेपाल विजेता अनुष्काले मिस वल्र्डबाट केहि न केहि उपलब्धि हाँसील गर्ने आशा गरेका छन् । जसमा उनले खरो उत्रनु पर्नेछ ।
संघर्ष, मेहनत र लगनशिलताले सफलता प्राप्त गरें
दिपाश्री निरौला, अभिनेत्री÷निर्माता÷निर्देशक
दिपाश्री निरौला हा“स्य व्यंग्य क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । वि.स २०३२ साल भदौ ७ गते विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा पिता तुलसी प्रसाद निरौला र माता गीतदेवीको कोखबाट जन्मिदा उनी ४ केजीकी थिइन् । अस्पतालले बढी वजन भएको बच्चा जन्माउने आमा गीतदेवीलाई पा“च सय नगद सहित सम्मान समेत गरेको थियो । आमाको निधन पछि उनका वुवाले दोश्रो विहे गरे ।
उनले २०४२ सालदेखि रंगमञ्चबाट आफ्नो रंगीन जीवन सुरु गरेकी हुन् । रंगमञ्चमा उनले पहिलो पटक पुरुषको भेषमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । दीपा रेडियो कार्यक्रम हु“दै टेलिभिजन र ठूलो पर्दामा देखिन थालेकी हुन्। चलचित्रमा नायिकाको भूमिका समेत देखिन थालेकी उनलाई दर्शकहरुले हा“स्यव्यंग्यमा बढी मन पराउन थाले। टेलिचलचित्र तितो सत्यले उनलाई मात्र होइन दीपक राज गिरीसंगको उनको जोडीलाई पनि दर्शकहरुले अत्यन्तै मनपराए। जोडी सफल भएकै कारण धेरैले उनीहरु वास्तविक जोडी भएको अनुमान समेत गरे। तर दीपा अविवाहित छिन् भने दीपकराज गिरी विवाहित हुन् ।
ठुलो पर्दामा भने ‘नासो’ नामक फिल्मबाट आफ्नो करिअर सुरु गरिन् । उनले झण्डै एक दर्जन नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । नेपाल टेलिभिजनको हा“स्य व्यंग्य साप्ताहिक टेलिफिल्म ‘तीतो सत्य’ सुरु गरेपछि भने दिपाश्रीले पछाडी फर्केर हेर्न‘ परेन । दीपकराज गिरीस“ग जोडी बा“धेर ‘तीतो सत्य’ को निर्माण, निर्देशन तथा अभिनय गर्न थालेपछि दिपक र दिपाको जोडी जम्न पुग्यो । देश तथा विदेशमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा समेत उनीहरुको व्यस्तता बढ्न थाल्यो । पछिल्लो केही वर्षदेखि भने दीपक र दिपा सानो पर्दाबाट ठुदो पर्दातिर सरेका छन् । रेडियो प्रस्तुति, सानो पर्दा र ठुलो पर्दामा अभिनय पछि अहिले उनी निर्माता र निर्देशनको रुपमा समेत आ“फूलाई स्थापित गरिसकेकी छिन् । ‘६ एकान ६’, ‘वडा नं ६’ र ‘छक्का पञ्जा’ जस्ता चलचित्र दीपकराज गिरी संगको सहकार्यमा निर्माण भइसकेका छन्, जुन चलचित्रहरुले नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा नया“ कीर्तिमान रच्न सफल भएका छन् । अभिनय संगै निर्देशनको पाटोमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा उनी भन्छिन् ‘कामगर्दै जा“दा धेरै गर्न‘पर्दोरहेछ । आ“फूले सिकेको कुरा र जानेको कुरा त गर्नै प¥यो । मलाई सुरु देखि नै प्राविधिक पक्षमा धेरै इच्छा हुन्थ्यो । प्राविधिक पक्षलाई नियाल्दा नियाल्दै यसतर्फ आए“ । कलाकारितामा आएर नाम र दाम दुवै पाएकीमा उनी खुशी अनि सन्तुष्ट छिन् । भन्छिन् ‘कामको पूजारी हु“ म । जीवनमा लेखेको कुरा हुने रहेछ देखेर नहुने रहेछ ।’ हाल उनी नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति मुन्द्रेको कमेडी क्लव मार्फत पनि दर्शकहरु संग जोडिएकी छिन् । सरल स्वभावकी दिपाश्रीले लामो संघर्षपछि यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुन् । संघर्ष, मेहनत र लगनशिलताबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउ“छिन् ।
समाजका बिसंगतिलाई उतार्ने लेखिका
निलम कार्की निहारिका, साहित्यकार
अहिले निलम कार्की निहारिका चर्चित लेखिका हुन्, तर उनको यो चर्चा छोटो समयको मेहनतले भएको भने होइन । साहित्यमा आफूलाई स्थापित गराउन निकै समय र मेहनत खर्च गरेकी छिन् उनले । साहित्यिक क्षेत्र भन्नेवित्तिकै ए ! हो, ठिकै छ भन्ने मात्र भन्न रुचाउने मानिसका लागि उदाहरणीयपात्र हुन् उनी । उनी समाजमा भएका बिसंगति लाई उजागर गर्छिन्, कुरीति बिरुद्धमा लेख्छिन्, कलमको माध्यमबाट समाज परिवर्तनका लागि निरन्तर झक्झक्याइ रहन्छिन् । उनको लेखन केवल पढ्नमात्र हुँदैन, समाज बुझ्ने गरी प्रस्तुत गरेकी हुन्छिन् । उनले लेखेका पुस्तक हवन, वेली, अर्की आइमाई, चीरहरण यी सबैले समाज बुझ्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भने योगमाया उपन्यासमा उनले इतिहासलाई फेरि एकपटक कोट्याएकी छिन् । उनी ऐतिहासिक बिषयमा रुची राख्ने साहित्यकार हुन् । उनको चीरहरण र योगमाया दुबैले इतिहास पल्टाएका छन् र अहिलेको समाजलाई बुझ्न अवसर प्रदान गरेका छन् । उनले बि.सं. १९९८ मा समाधि लिएकी योगमायाको साहसलाई आफ्नो उपन्यासमा ल्याएकी छिन् ।
समाज परिवर्तनका लागि योगमायाले खेलेको भूमिका र आवाजलाई उनले साहित्यमार्फत प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनी महिलावादी पुरुषवादी लेखिकाभन्दा पनि समाजवादी लेखिका हुन् । उनी महिला र पुरुष दुबैलाई समान ढंगले हेरिनुपर्छ भन्छिन् । उनले लेखेको योगमाया, चीरहरणजस्ता उपन्यासका आधारमा उनलाई महिलावादी लेखिका भन्न भने मिल्दैन । जुन कुरा सहि छैन, त्यसबिरुद्धमा कलम चलाउने महिला हुन् । हुन त साहित्य कुनै आशा गरेर लेखिँदैन, यसले समाज परिवर्तन र सुसुचित बनाउन कलमको माध्यमले सचेत गराउने काम गर्छ । सचेत गराउँदै जाँदा कसैलाई सम्मानले अर्को हौसला प्रदान गरिदिएको हुन्छ । उनलाई पनि मदन पुरस्कारले त्यस्तै हौसला प्रदान ग¥यो । उपन्यास ‘योगमाया’का लागि उनले मदन पुरस्कार पाएकी हुन्, जसको चर्चा अहिले सम्म पनि चुलिएकै छ ।
उपन्यास मनोरञ्जनका लागिमात्र लेखिने पढिने हो भन्ने मान्यता हाबी भइरहेको बेला उनको अनुसन्धानात्मक उपन्यासले मदन पुरस्कार जित्नुलाई साहित्य क्षेत्रको ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ । अमेरिकी पत्रकार तथा सामाजिक अनुसन्धानकर्ता बार्बराको अनुसन्धान तथा नेपालबाट योगमायाको विषयमा लेखिएका सबै पुस्तक तथा फिल्डमै गएर उनले गरेको अनुसन्धानको प्रतिफल हो योगमाया । करिब दुइ वर्षमा लेखिएको यो उपन्यास अनुसन्धान गर्न उनलाई असहज धेरै भएको थियो । योगमायासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी तथा आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गर्ने कठिन भएको त्यो समयलाई उनले सम्झिदा ‘एउटा परीक्षार्थीले परीक्षाको तयारीको बेला जति ब्याग्ररुपमा तयारी गर्छ, उस्तै तयारी मेरोतर्फबाट गरेको थिए’ उनी भन्छिन् । धेरै अनुसन्धानमा आधारित रहेर उपन्यास तयार पारेका कारण पनि यो उपन्यास बढी विश्वसनीय बनेको हो । कार्कीले दुइ वर्षअघि ‘चीरहरण’ उपन्यासका लागि दुइ लाख रुपैयाँको पद्मश्री पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी थिइन् । नेपाली साहित्यमा पद्मश्री मदन पुरस्कारपछि अर्को महत्वपूर्ण पुरस्कार मानिन्छ ।
२०३१ सालमा जन्मिएकी नीलमले ‘मातृत्वका यी दुइरुप’ दीपशिखा पत्रिकामा प्रकाशन गरेर साहित्यिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् । नेपाल रहुन्जेल सञ्चारकर्मी तथा साहित्यकारका रुपमा चिनिएकी उनी विवाह गरेर अमेरिका प्रस्थान गरेपछि पनि साहित्य क्षेत्रमा भने निरन्तर लागिरहेकी छिन् । महिलाको विवाहअघि र विवाहपछिको करियरमा फरक पाइन्छ, उनलाई पनि सुरु सुरुमा त्यस्तै भएको थियो । बच्चा सानो, अब त लेखनयात्रा सकियो कि भन्ने मनमा लागेको बेला निद्रासँग समय सापटी मागेर आफ्नो लेखनयात्रालाई थप मजबूत बनाउने कोशिस गरेकी उनलाई श्रीमान् तथा आमाको सहयोगले लेखनका लागि झन् कलम तिखारियो । विदेशी भूमिमा गएपछि चटक्कै माया मार्नेका लागि पनि उनी अर्को उदाहरण्ीाय पात्र बन्न सफल छिन् । मातृभूमि छोडेर पनि नेपाली साहित्य क्षेत्रमा संलग्न हुनु गौरवको विषय पनि हो ।
स्टेज कार्यक्रममा दर्शक नचाउ“दा सबभन्दा खुशी लाग्छ
मेलिना राई, चर्चित गायिका
मेलिनााले १२ वर्षको उमेरमै पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिइन् । आफ्नै बुबाको शब्द रचना तथा संगीत रहेको गीत ‘हिमालको काखमा छ मेरो सुन्दर देशमा स्वर दिने मौका पाएकी थिइन् । गीतमा मेलिनासहित सात जनाको स्वर थियो । त्यसपछि ०६५ सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गीत गायन प्रतियोगितामा मेलिना राई प्रथम भइन् । संगीत क्षेत्रमा उनको नाम गाइ“गुइ“ सुरु भएको थियो । त्यसपछि झण्डै सात वर्षसम्म गीतको कोरसमा आवाज दिइन् । तर, उनी कोरसमा मात्र सीमित भइन् । फाट्टफुट्ट सोलो गीत रेकर्ड गराउन थालिन् । बेलाबेला अग्रज कलाकारहरुका साथमा स्टेज चढ्ने अवसर पाइन् ।
सांगीतिक परिवारमा हुर्केकी उनलाई ‘नाइ“ नभन्नु ल–३’ फिल्मको ‘कम्मरमाथि पटुकी, फिल्म दुई रुपियाँको कुटुमा कुटु बोलको गीतले जीवनकै टर्निङ पोइन्ट दिलायो । ‘कुटुमा कुटु’ ले युट्युबमा सर्वाधिक १० करोड बढी भ्युजपाएको छ । यो सफलताले मेलिनाको करिअरमा कायापलट नै भयो । स्टुडियोदेखि स्टेज कार्यक्रमसम्म उनकै माग छ । मेलिना भन्छिन्, ‘कुटुमा कुटु हिट भएपछि त मलाई स्टेज कार्यक्रमहरुको चापाचाप परिरहेको छ ।’ ‘तिमीले बाटो फेर्यौ अरे’ बोलको गीतले धेरैलाई मेलिना राईको मीठो स्वरको साथै शारीरिक सुन्दरतालाई पनि दर्शक माझ चिनाउन सफल बन्यो । अहिले सम्म कति गीत गाए“ भनेर गणना समेत गर्न नसकेकी मेलिनाका अधिकांश गीत दर्शक श्रोताले मन पराएका छन्, उनका एल्वमका गीतहरुको निश्चित श्रोता भए पनि चलचित्रका गीतहरु सबै उमेर समुहले मन पराउ“छन् । मेलिनाले गाएका अधिकांश गीत युट्युवको ट्रेन्डिङमा पर्ने गरेका छन् । मेलिनाको स्वरको जादुको कारण अधिकांश गीतकार र संगीतकारले उनलाई रोज्ने गरेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुमाझ पनि उनको आवाज प्रत्यक्ष रुपमा घन्किएको छ । उनले पन्ध्र भन्दा बढि मुलुकमा पुगेर आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेकी छिन् । स्टेज कार्यक्रममा पुगेर दर्शकलाई नचाउ“दा निकै खुसी हुन्छिन् उनी । स्टेजमा पुगेर उनले यही“ गीत गाउने भन्ने छैन । दर्शकको माग अनुसार गीत गाइरहेकी हुन्छिन् मेलिना । तर, हरेक स्टेज शोमा नछुट्ने गीत हो, ‘कुटुमा कुटु’ । दश वर्षको उमेरदेखि नै बुवास“ग संगीत सिकेकी मेलिनाको पहिलो गीत बाह्र वर्षको उमेरमा रेकर्ड भएको थियो । चञ्चले स्वभाव कि मेलिना अविवाहित गायिका हुन्, उनका लाखौं फ्यानहरु छन्, ती मध्ये कोहिले जिस्काउ“छन् भने कोहिले प्रेम प्रस्ताव नै राख्छन् । तर उनी आफ्नो व्वाईफ्रेन्ड नभएको बताउ“छिन् ।